Xuseen Caydiid oo ku dhawaaqay inuu yahay musharrax Madaxweyne | KEYDMEDIA ONLINE
Xuseen Caydiid oo ku dhawaaqay inuu yahay musharrax Madaxweyne
Hoggaamiyihii SNA Xuseen Maxamed Faarax Caydiid, ayaa maanta ku soo laabtay dalka, wuxuuna ku dhawaaqay inuu u taagan yahay qabashaa Xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaare ku xigeynkii hore ee Soomaaliya, Xuseen Maxamed Faarax Caydiid ayaaa maanta dib ugu soo laabtay dalka, wuxuuna ku dhawaaqay inuu yahay musharrax u taaqan qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya doorashada soo socota.
Xuseen Caydiid, oo ka mid ahaa Dowlddii ku meel gaarka ahayd ee Cabdullaahi Yuusuf, ayaa sheegay inuu go’aansaday inuu waddanka kusoo gurya noqdo, ka gadaal markii uu arkay xaaladaha dalka oo ka sii daraya.
Ina Caydiid wuxuu qudbad gaaban uu jeeday ku sheegay inuu doonaya ka shaqeynta xal u helidda ismaan dhaafka siyaasadeed ee taagan.
“Waxaan geed gaaban iyo mid dheerba u kori doonaa in Soomaaliya hesho Dowlad adag oo samata bixisa, dalkana u hor seedda midnimo, caddaalad, rajo iyo Horumar”. Ayuu yiri Xuseen.
“Waxaan ahay musharrax doorashada 2021, la diyaar gareynayo” Ayuu sido kale ku daray Ra’iisul Wasaare ku xigeynkii hore ee dalka.
Xuseen wuxuu ballan qaaday inuu la fariisan doono cid kasta oo gacan ka geysan karta, nabad kusoo dabaalidda dalka, iyo xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee lagu muransan yahay.
Xuseen Maxamed Faarax Caydiid, waa wiilka General Mohamed Farrah Aidid, hoggaamiyihii United Somali Congress ‘USC’, iyo Somali National Alliance ‘SNA’, Xuseen, wuxuuna dhaxlay jagadii aabihiis, kadib labo maalin geeridiida, wuxuuna ku dhawaaqay inuu yahay Madaxweynaha Soomaaliya, inkasta oo aan caalamku aqoonsan.
Xuseen Caydiid, ayaa ka tanaasulay sheegashadiisii Madaxweyne bishii Diseembar 1997, isagoo saxiixay Baaqii Qaahira, oo ahayd tallaabo muhiim ah oo loo qaaday nabadda Soomaaliya.